Android မှာမျက်နှာပြင်လည်ခြင်းကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲ Androidsis
Ignacio Sala | | Android ထုတ်ကုန်များ, Android cheat
သို့သော်၊ သုံးစွဲသူအားလုံးကစက်ပစ္စည်းကိုလှည့်မပေးသောကြောင့် application သည်ဤနည်းဖြင့်အကြောင်းအရာကိုအလိုအလျောက်ပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းပေါ်သို့သွားနေလျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်ရွေ့လျားနေလျှင်မိုဘိုင်းအလျားလိုက်အလွယ်တကူကိုင်တွယ်ရန်မလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒေါင်လိုက်။ သငျသညျငလိုလျှင်သင်၏ terminal မျက်နှာပြင်ကိုလှည့်ခြင်းမှကာကွယ်ပါဒီမှာလိုက်နာရမည့်အဆင့်များ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းမျက်နှာပြင်အနေအထားပြောင်းလဲမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါပြောင်းလဲခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်းကိုမည်သို့တည်နေရာကိုဂရုစိုက်စရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့လှုပ်ရှားနေသည့်အချိန်တွင်ပါဝင်သည့်အရာများကိုအာရုံစူးစိုက်စေသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်စွမ်းအားမြင့်စမတ်ဖုန်းများတွင်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်သော်လည်းစွမ်းအားနည်းသောမော်ဒယ်များတွင်၊ မျက်နှာပြင်လည်ပတ်အချိန်အပူတပြင်းရှိနိုင်ပါသည် တစ်ခုထက်ပိုသောကြောင့်၎င်းကိုလုံးဝပိတ်ထားရန်။
Android ကငါတို့ကိုခွင့်ပြုတယ် မတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့်မျက်နှာပြင်လည်ပတ်မှုကိုပိတ်ပါ။ အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ၎င်းကိုလျင်မြန်စွာ activate လုပ်ရန်နှင့်ပိတ်ထားရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့် screen ကိုထိပ်ကနေကျွန်ုပ်တို့လက်ချောင်းကိုလျှောချလိုက်သည့်အခါရရှိနိုင်သည့် shortcut menu မှတဆင့်ဖြစ်သည်။
ငါတို့သည်လည်းတိုက်ရိုက်က deactivate နိုင်ပါတယ် Terminal ကို Settings မှတဆင့်။ ဤသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည် -
ကျနော်တို့ access ကိုပြီးတာနဲ့ setting များကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal မှကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ ဖန်သားပြင်.
အတွင်း ဖန်သားပြင် အကယ်၍ ရွေးစရာကိုတိုက်ရိုက်မပြလျှင်၊ ကိုနှိပ်ပါ အဆင့်မြင့်.
ဖန်သားပြင်၏အလိုအလျောက်လည်ပတ်မှုကိုရပ်တန့်ရန် switch ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ထားရမည် မျက်နှာပြင်ကိုအလိုအလျောက်လှည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို Terminal Settings မှပိတ်ထားသော်လည်း၎င်းကို shortcut menu မှပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်သည် ၎င်းသည် menus များအတွင်းရရှိနိုင်သည့် function ကိုဖြတ်လမ်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » Android မှာမျက်နှာပြင်လည်ခြင်းကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
Pocophone X3 NFC သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ Snapdragon 732G, LiquidCool နှင့် 33W မြန်သောအားသွင်းဘက်ထရီ